‘Siyai maWarriors akadaro’ | Kwayedza
‘Siyai maWarriors akadaro’
14 Sep, 2018 - 00:09	 2018-09-13T08:12:33+00:00 2018-09-14T00:00:59+00:00 0 Views
SHASHA dzakambonetsa dzichitambira nhabvu chikwata chenyika chemaWarriors dzinoti zvakakosha kuti chikwata chiripo parizvino chirege kusandurwa sezvo chinogona kusvika kure mumutambo weAfrica Cup of Nations (Afocn) apo chiri kurwira kuenda kuCameroon gore rinotevera.
Svondo radarika, maWarriors akaita mangange 1-1 neCongo Brazzaville mumutambo wavo muGroup G.
MaWarriors ndiwo ari panyanga akatarisana nemutambo inotevera apo paachasangana neDemocratic Republic of Congo mumitambo miviri yakatevedzana musvondo rimwe chete.
Akakwanisa kuhwina mitambo yawo neDRC, maWarriors anenge ave nemukana mukuru wekubudirira kuenderera mberi mumutambo uyu izvo akamboita katatu kose asi achikoniwa kutamba zvinogutsa.
Zvakadai, svondo rino Kwayedza yakaita hurukuro nedzimwe shasha dzakambotambira maWarriors dzinosanganisira Leo Kurauzvione naHarlington Shereni avo vanoti chikwata ichi ngachirege kusandurwa zvachose.
Vaviri ava vamwe vevaive muchikwata chemaWarriors chekutanga kuenda kunomirira Zimbabwe kuAfcon mugore ra2004 kuTunisia.
Panguva iyi, Kurauzvione aitambira Dynamos FC kozoti Shereni aitambira Guingamp yekuFrance.
Kurauzvione anoti zvakakosha kuti chikwata ichi – icho chine vatambi vakaita saKnowledge Musona, Khama Billiat, Kuda Mahachi, George Chigova naEvans Rusike – chirambe chakangobatana sezvachiri.
“Chikwata chedu chine mukana mukuru wekusvika kure asi hachidi kungoshandurwa-shandurwa zvisina tsarukano. Chiripo ichi ngachisiiwe chakadaro chiite basa racho chovakwa chakadaro, kwete kuti padiki mashandura kwauya vamwe vatambi.
“Zvikwata zvenyika hazvina nguva zhinji zviri zvese saka nguva shoma iyoyo vatambi vakambotamba vese kare vanenge vachizivana matambiro avanoita, manje kana muchivashandura-shandura pese pese zvinodzorera basa kumashure,” anodaro.
Gore rakatanga maWarriors kubudirira kuenda kuAfcon, chikwata chacho chaive nevatambi vashoma vaitambira kunze kwenyika.
Kurauzvione anoti mamiriro ezvinhu parizvino akakosha zvikuru nekuti vatambi vari kutambira kunze kana vauya havafanirwe kutanga kuchema-chema nekuda kwenyaya dzemari nekuti kuzvikwata zvavo zvavanenge vabva vanowaniswa zvese zvavanoda.
“Patori nemusiyano mukuru nechikwata chedu nekuti chikwata chavepo iye zvino chizere nevatambi vari kutambira kunze kwenyika uko kwavanowaniswa zvese zvavanoda, vanochengetedzwa zvakanakisa uye chavo kungofunga zvenhabvu chete. Saka kana vave kuuya kuzotambira maWarriors ngavafunge kusimudzira mureza wenyika kwete zvemari nekuti kwavari kubva kwakanuna kare.
“Chatiri kuda kuona basa richifamba, vakomana ava vane mukana mukuru uye ngavaushandise sezvauri,” anodaro Kurauzvione.
Mashoko ake anotsinhirwa naShereni uyo akatambira zvikwata zvizhinji zvekuFrance achiti maWarriors anofanira kuramba akabatana.
“Isu sevatambi vakambotambira kunze kwenyika uye kumutambo weAfcon uyu tinoda kupihwa mukana wekumbotaura nevatambi variko ava tichivarayira nzira dzavanofanirwa kuzvibata nadzo kana vachida kusvika kure.
“Ngavasati vakangoenda kuSouth Africa votozviona kuti vakatopenga, aiwa kwete. Ngavashingirire kusvika vasvika kuEurope vatambire zvikwata zvikuru uye mumaligi makuru akaita seEnglish Premiership, La Liga, Serie A neFrench Ligue 1,” anodaro.